Weerar kadhacay Afgaanistaan oo lagu dilay inka badan 250-ruux – Radio Daljir
Janaayo 28, 2018 6:33 b 0
Ku dhowaad 95- ruux ayaa ku geeriyooday, 158- kallena waa ay ku dhaawacmeen qarax wayn oo ka dhacay caasimadda Afgaanistaan ee Kaabuul.
Kooxda Daalibaan ayaa sheegatay masuuliyadda weerarka oo ah kii sadexaad ee dhaca muddo sideed cisho.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arimaha gudaha ayaa ku eedeeyey kooxda xiriirka la leh Taalibaan ee Xaqani inay weerarka fulisay , kuwaasi oo weeraro ka gaysta magaalooyinka dalka Afgaanistaan.
Kooxaha weerarka fuliyay ayaa adeegsaday gaadiidka gurmadka oo qaraxyo ay ka buuxaan oo ku qarxay meel u dhis dhismaha wasaaradda arimaha gudaha oo ku taallo waddo aad mashquul u ah aadna loo ilaaliyo oo ku taala bartamaha magaalada Kaabuul,
Goob jooge ayaa u sheegay warbaahinta Aljazeera inay maydad iyo dhiig yaaleen meel walba, dadkuna ay ahaayeen kuwa oynaya, kuwa carraraya iyo kuwa qaylinaya.
Qofka weerarka fuliyay ee adeegsaday gaadiidka gurmadka ayaa kasoo gudbay barkantorool oo ciidamadu gaadiidka ku baaraan, waxaana uu booliska uu usheegay inuu wado qof bukaan ah oo uu dhigayo isbitaalka.